Shacab Weynaha Twitter-ka Oo Thugs of Hindostan Disaster Ku Tilmaamen Xili 50 Crore Maalintiisa Kowaad Uu Keenay Iyo Aamir Khan Oo Leh Maxaa Iga Qaadi Kartiin Kuwa Filmkeyga Dhaliilay!! – Filimside.net
Shabakada Box-office-ka India ayaa caawa war aad loola yaabay ku dhawaaqday kadib markii ay sheegtay in mashruuca weyn Thugs of Hindostan uu maalintiisa kowaad keenay 50 Crore lacag ah qayaas ahaan.
Waa wax waali ah in TOH oo maanta si weyn sheekadiisa loo dhaliilay ilaa xalayna dhaliil cad lagu waday uu hadana maanta ganacsigan waalida ah sameeyay isagoo iskoor walba cagta mariyay iskoor cusubna dhigay.
Hubaal ahaan Aamir Khan Mr.Prefectionist bilaash looma dhihin TOH waxuu jabiyay iskoorkii u yiilay filmkii Baahubali 2 ee maalinta kowaad 40 Crore keenay balse Aamir 50 Crore ayuuba kudhowyahay inuu ka talaabsado qayaas ahaan.
Dad badan oo Twitter-ka isticmaalan ayaa mashruucan dhaliileen sheeko ahaan waxayna ku tilmaameen in ganacsi ahaan bur buri doono (Disaster) oo wax daawado uu weyn doono balse Aamir Khan awoodisa iyo fasaxa Diwali-ga ayuu wax ku tusay kuwa kasoo horjeeday mashruucisa.
Caawa farxad uma dhina Mr.Prefectionist maadama iskoor cusub uu u bilaaway Bollywoodka hada kadib film walb aoo tikitkiisa qaali laga dhiga fasax sidaan oo kalena helo 50 Crore wey la sahlanaan doonta inuu keeno madama aabaha iskoor sameenta uu maanta u bilaaway.
Aamir Khan dhag jalaq uma siinayo kuwa ganacsiga sida dhex dhexaadka oga hadlaan ee mashruucisa dhaliileen iyo kuwa falanqeyaan sheekada filmka oo mashruucan sheekaadiisa dhaliilen wadada haloo baneeyo aabaha iskoor sameenta dalka India waa xiligiisa xiligaan.